အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 15-11 - သတင်း Rule
အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 15-11
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 15-11 - ငါတို့သည်သိနားလည်အဖြစ်လောကီနှင့်မအဆုံး” ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart ကရေးသားခဲ့သည် , ငွေရတတ်သောသူ Stanton တို့နှင့်ယော်ဒန်မြစ် Erica Webber, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 16 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2015 10.05 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကျနော်တို့ဒီနှစ်အကောင်းဆုံးဂိမ်းရဲ့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအားဖြင့်က်နေ, ယနေ့ဖွင့်အရစ်ကျအခြားရွေးချယ်စရာများပြားရွေးချယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး. Apocalyptic ဒရာမာထဲကနေထူးထူးဆန်းဆန်းအခန်းကဏ္ဍ-ကစား escapades မှ, ဤအကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းစာရေးဆရာများယခုနှစ်အတွင်းအများဆုံးကစားခဲ့ကြရာခေါင်းစဉ်များမှာ.
15. လူတိုင်းဟာအချီဆောင်မှ Gone င် (PS4 ကို)
ထပ်မံကျဆိုရငျ4ထို့နောက်ဂန္အမေရိကန်ခေတ်လွန်ကမ္ဘာပျက်ဖြစ်ပါသည် လူတိုင်းဟာအချီဆောင်မှ Gone င် စုံလင်သောဗြိတိန်နိုင်ငံကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးစွန့်ပစ် 1980 West Midlands မှာလည်းရွာပတ်ပတ်လည် traipse အဖြစ်, ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယျသို့ထွက်တွက်ဆဖို့ကြိုးစားမှအတိတ်ပြောဆိုမှုများ၏သရဲတစ္ဆေကိုနားထောငျ, သင်ဤ Brit ဘေးဒုက္ခဒီလိုမျိုးတုံ့ပြန်မယ်လို့အတိအကျဘယ်လိုခံစားရ, အထူးသဖြင့်တွစ်တာရှေ့တော်၌အချိန်အတွက်. ကျနော်တို့ကမြို့တော်ခန်းမအတွက်အစည်းအဝေးတွေရှိချင်ပါတယ်, ကျနော်တို့အဆငျမပွမှေု ပတ်သက်. တိုင်ကြားချင်ပါတယ်, ကျွန်တော်အဖငျြးပွောချင်ပါတယ်. ချီဆောင်ကိုခေါ်ပြည်သူ့ "ဒီ Archer လောက၏အဆုံးသည်နှင့်တွေ့ဆုံ" နှင့်အကြံပြုကြောင့်ဆက်ဆက်အဖြစ်လှပမတူသည် (နှင့်တေးသံလည်းလက်ရာမြောက်သောဖြစ်ပါသည်).
14. Beginner ရဲ့လမ်းညွှန် (PC ကွန်ပျူတာ / Mac က)
တှေးအချေါဂိမ်းရဲ့ဂိမ်း ... Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်.
အဘယျအမှအစပြုသူရဲ့လမ်းညွှန်, တဦးတည်းမေးမြန်းစေခြင်းငှါ? ထိုအစွန့်ပစ်တဝက်-ချောဂိမ်း၏ဤ quizzical ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်သူမျှမလွယ်ကူသောအဖြေကိုရှိပါတယ်, ကျွန်တော်တစ်ဦး tricksy ဇာတ်ကြောင်းပြောသဖြင့်တဆင့်ပဲ့ထိန်းထားတဲ့. ဒါကစိတ်ဓါတ်များဂိမ်းတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, အလွန်အကျွံရှေ့သို့ pried မဖြစ်သင့်သည့်အတွေ့အကြုံ, တထိုင်ထဲမှာခံစား. whimsical တစ်ခါတလေ, Melancholie ကိုအခြားသူများမှာ, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပါသည်. ၎င်း၏ယခင်လိုပဲ, အဆိုပါ Stanley တို့ပုံဥပမာ, အဆိုပါလက်ရဲ့လမ်းညွှန်ဂိမ်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားရန်လိုသူဂိမ်းကစားဘို့ဖြစ်၏.
13. ဘဝကထူးဆန်းသည် (မျိုးစုံသောပုံစံများ)
ဘဝကထူးဆန်းသည် ဓါတ်ပုံ: ရင်ပြင် Enix
ပြင်သစ်စတူဒီယို Dontnod ရှိပြီးသား underrated နှင့်အတူ၎င်း၏ idiosyncratic ဇာတ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်မှုမှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည် ငါ့ကိုသတိရပါ တွင် 2013 - ဒါပေမယ့် ဘဝကထူးဆန်းသည် စစ်မှန်သောဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်. သူမဝိညာဉ်တော်သည်မိတျဆှေ Chloe နှင့်အတူသူမ၏ဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေစူးစမ်းစဉ်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေသူတစ်ဦးနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေအဖြစ်ဇာတ်လမ်းဆယ်ကျော်သက်အချိန်-ခရီးသွား Maxine Caulfield အောက်ပါအတိုင်း. ကြိမ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအဆင်မပြေပေမဲ့, စိတ်ကျရောဂါပတ်ပတ်လည်ကိစ္စများနှင့်အတူဂိမ်းအပေးအယူ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အနည်းငယ်ဂိမ်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအနီးသွားကြောင်းလိင်, တစ်ဦးကိုရှင်းရှင်းလန်းဆန်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်အောင်.
12. မူလစာမျက်နှာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း (PC ကွန်ပျူတာ / က PS4)
မူလစာမျက်နှာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း ဓါတ်ပုံ: Ubisoft
အပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအတွက်နေရာအနှံ့စကားလုံးနုလှတွေနဲ့များမှာ, ဒါကြောင့်သင်နေရာတိုင်းအတွက်နေအိမ်ရဲ့ကြီးထွားလာ beanstalk နှင့်သင်ဖန်တီးဆွယ်၏များစွာတိုးတက်ကြီးပွား phalluses ကိုမြင်လျှင်အဘို့အပြစ်မှလွှတ်ပါလိမ့်မယ်. ကြောင်းအတွက်ချီးမွမ်းကြောင်းမူလစာမျက်နှာတိုးတက်ကြီးပွားသည်ကိုသင်လုံးဝကိုပထမဦးဆုံးအနညျးငယျတဟီဟီရယ်ပြီးနောက်မေ့လျော့တော်ပါလိမ့်မယ်ကဆော့ကစားရန်ထိုကဲ့သို့သောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, ဂရုတစိုက်အသစ်အထွဋ်ဖို့နည်းနည်းအနီစက်ရုပ်ကြိတ်ကြိတ်တိုးတန်းစီအတွက်အစားသုံးသော, မိမိလမ်းသို့မိမိနှင့် beanstalk ရဲ့တိုးတက်မှု၏လမ်းကြောင်းကိုနှစ်ခုစလုံးစီစဉ်, နှင့် slog ကျိုးနပ်ပါစေသောတော်တော်လေးအနားအမြင်များနှင့်ချစ်စရာကောင်းအံ့သြဖွယ်တစ်ခုမျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ခြင်း.
11. Undertale (PC ကွန်ပျူတာ / Mac က)
Undertale ဓါတ်ပုံ: Toby Fox က
အဆိုပါ lo-Fi ပုံရိပ်ယောင်များအတိတ်ကာလမှ thrall အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုအကြံပြု, အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားဂိမ်းနှင့်အထူးသဖြင့်ကို Nintendo ရဲ့ခြွင်းချက်အမေစီးရီး. သို့သော်ဤမျက်နှာစာအနုပညာအပေါ်တစ်ဦး fizzingly ခေတ်ပြိုင်ယူဖုံးကွယ်, အစားမိကျောင်းဖို့ပြောနေတာ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူတစ်ဦးကျည်ဆံငရဲတိုက်ခိုက်ရေး minigame ပြီးရှိကြတယ်တ. မူရင်း, အံ့သြဘွယ်ကောင်းသော, အဆက်မပြတ်အံ့အားသင့်စရာ - နှင့်တစ်ဦးရှည်လျားသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူ - Undertale သတိမမူမဖြစ်သင့်.
The Guardian ကဂိမ်းများ '' တစ်နှစ်တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း '' ကြာသပတေးနေ့ညဦးယံအချိန်ပေါ်တွင်ဂါးဒီးယန်းရဲ့ဖြစ်သူ Scott Room ၌ရာအရပျကိုယူပြီးနေသည်, 7-8.30ညနေ. Keith Stuart featuring, စာရေးဆရာများကိုရှိမုနျပါကင်နဲ့ Cara Ellison နှင့်ဂိမ်း developer များက Mike Bithell, ကျနော်တို့ပြန်ကြည့်မယ် 2015, mince pies နှင့်ဧရာအတူ (အခမဲ့!) အံ့သြဖွယ်ဆုနှင့်အတူ Xmas tombola! ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်လက်မှတ်တွေ.
← Star Wars: အဆိုပါအင်အားစုနိုးထကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အဆိုပါ 25 ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်း 2015: 10-6 →